Mandà Ny Fanampian’i Japana i Shina Taorian’ny Horohoron-tany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Avrily 2013 4:00 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, македонски, 繁體中文, 简体中文, English
Amin'ny teny anglisy avokoa ny rohy amin'ity lahatsoratra ity ankoatra izay lazaina manokana
Nandà ny tolo-tanàn'i Japana hanampy azy taorian'ny fihovitrovitry ny tany izay nahazo ny atsimo andrefan'ny faritanin'i Sichuan nahafatesana olona 193 raha kely indrindra sy maratra mihoatra ny 12 000 [zh] ny governemanta Shinoa.
Nitranga ny marainan'ny 20 avrily 2013 nahazo ny faritra be tendrombohitra manakaiky an'i Ya'an, tanàna ahitana mponina 1,5 tapitrisa malaza noho ny biby panda ao aminy sy ny orinasa famokarana dite, ny fihovitry ny tany izay nahatratra 7 amin'ny maridrefy Richter araka ny nolazain'ny fitondram-panjakana shinoa.
Vetivety monja taorian'ny hovitrovitra, naneho fiaraha-miory ny praiminisitra Japoney Shinzo Abe ary nanolo-tanana hanampy ny mpitarika shinoa ary nofaritany tsara fa “vonona hanao ny faratampony amin'ny fanohanany” i Japana.
Ho setrin'izany, tamin'ny 21 Aprily,nilaza ny Minisitry ny Raharaham-bahiny Shinoa tao amin'ny filazam-baovaony mpivoaka isan'andro fa mankasitraka izany fihetsika izany ny governemantany, saingy nofaritany fa tsy mila fanampiana avy amin'ny vahiny izy ireo hatreto, satria mbola tsentsina ireo lalana ary mahavita azy ny manampahefana Shinoa amin'ny fitantànana ny asa famonjena:
Fihovitrovitry ny tany tao Ya'an izay namoizan'ain'olona 193. Sary avy amin'i @Shiqi Shen(CC BY-SA 2.0) tao amin'ny Flickr
Taorian'ny horohorontany tamin'ny 20 aprily tao Lushan, faritra Sichuan, naneho ny fiaraha-mioriny ny fikambanana iraisam-pirenena ary nanolo-tanana hanampy. Nisy ihany koa ireo firenena sasany naneho ny fikasany hanolo-tanana amin'ny sehatra rehetra, izay nankasitrahan'ny governemanta shinoa sy ny vahoakany. Ny governemanta Shinoa no niantoka manontolo ny asa famonjena sy ny fananerana. Ankehitriny, manana mpitsabo ampy sy mpiasa ilaina izahay, ary ampy ihany koa ny sakafo, ary na dia eo aza ny olana eo amin'ny fifandraisan-davitra sy ny fifamoivozana eny amin'ny faritra niharan'ny horohorontany, tsy mila fanampiana avy amin'ny ekipa mpamonjy voina vahiny, na ekipa mpitsabo, na fanomezana fanampiana izahay hatreto. Raha sendra mila izany izahay, dia manao antso avo amin'ireo firenena tandrify. Nolavin'ny Vokovoko Mena Shinoa ihany koa ny fanampiana ara-bola avy any ivelany.
Saingy nandritra izany, nanambara ny fahatongavan'ireo mpamonjy voina Rosiana 200 ny fampahalalam-baovaom-panjakana.
Tamin'ny fotoana tsy milamina eo amin'ny fifandraisan'i Shina sy i Japana no nahatongavan'ny tolo-tanana avy amin'i Japana, satria mbola mifanditra momba ireo nosy ao atsinanan'ny ranomasin'i Shina izy ireo.
Niteraka adihevitra mafana tao amin'ny media sosialy Shinoa ny fandavàn'ny Minisitera ny tolo-tanan'i Japana, nisy ireo sasany nanadino ny fifandirana ara-tsisintany niseho vao haingana sy ny lolom-po ara-tantara eo amin'ny firenena roa tonta.
“Kuaile Songxiang” avy ao Pékin nanoratra [zh-chinois] fa tokony hianaran'i Shina ny fisorohana ny loza ao Japana, tamin'ny fanehoan-keviny tao amin'ny Sina Weibo, habaka be mpitsidika amin'ny bilaogy madinika:
Tsy hoe tokony hanaiky ny fanampiana avy amin'i Japana fotsiny isika, fa mila indrindra mianatra ireo fomba ataon'i Japana amin'ny fisorohana sy ny fampihenana ireo loza voajanahary.
“anarana tsy misy dikany intsony”, mpisera Weibo, nizara ity fihetseham-po ity ary nitaraina [zh] hoe:
Nasionalisma tery izao, toa manana maso ngeza kokoa noho ny kibo isika, tena mahamenatra mihitsy ve ny manaiky ny fanampiana avy amin'i Japana ?
Na dia izany aza, “Yanger Dini” avy ao avaratra-andrefan'ny tanànan'i Xi'an, niaro ny governemanta ary nilaza ny fomba fijeriny [zh]:
Marobe ireo resa-politika mifampidipiditra, indostria mavesatra sy orinasa nokleary maromaro no ao akaikin'i Sichuan, ka matoa tsy miantso fanampiana avy ivelany isika, dia noho ny antony ara-piarovana ny firenena.
“Pushan Pushan De Yanjing” avy ao Nanchang, renivohi-paritany ao atsinanan'ny faritra Jiangxi, nanesoeso [zh-chinois] hoe:
Iharan'ny fampielezan-kevitra ratsy ampiasaina mba handrisihana ny nasionalisma i Japana, ka raha avelantsika hanao zavatra tsara ho an'i Shina izy, hanatsara ny endriny eo imason'ny vahoaka shinoa izany, izay ratsy amin'ny fampielezan-kevitra, araka izany…
Toa sahiran-tsaina i “Yihao Caomin” [zh] amin'ny fampitahana ireo firenena roa tonta, ka nilaza momba ny hadalan'ny Vokovoko Mena Shinoa izy sy ireo vaovao navoakan'ny fampahalalam-baovao momba ny sarin'ireo mpitarika mihinana paty masaka minitra vitsy ho fanatsarana fotsiny ny endrin'izy ireo:
Niaina fihovitry ny tany imbetsaka i Japana: namely an'i Japana avokoa ny horohorontany maherin'ny 1 000 na ny 10%. Saingy tsy nitera-doza be loatra ny fihovitry ny tany tao Japana. Satria nahoana? 1. Mahazaka horohorontany ireo trano fonenana, tsy misy ny tetikasa fanamboarana kitoatoa. 2. Matihanina sy hainga-piasa ny fikambanana mpamonjy voina, tsy mirotsaka an-tsehatra ny tafika tsy manana traikefa, tsy misy ny fandavàna tolo-tanana avy any ivelany. 3. Tsy misy ny sarin'ireo tompon'andraikitra mihinana paty masaka minitra vitsy na ranombarim-bazaha hanatsarana ny lazan'izy ireo. 4. Tsy manana Guo Meimei ny Vokovoko Mena (ao Japana). 5. Afaka miditra Twitter malalaka tsy misy lahatsoratra voafafa ny olona. 6. ….afaka mameno ny lisitra ianao